IATA Transparency muPayments ikozvino mumisika yeFinland, Norway neSweden
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » IATA Transparency muPayments ikozvino mumisika yeFinland, Norway neSweden
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Finland Kuputsa Nhau • Investments • Norway Kuputsa Nhau • Sweden Kupwanya Nhau • Technology • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
International Air Transport Association (IATA) yakazivisa kuti Transparency in Payments (TIP) yakaitwa mumisika yeFinland, Norway neSweden. ZANO, iro riri kuunzwa pamwe chete neNewGen ISS, chirongwa cheindasitiri chakanangana nekupa nendege nekuwedzera kujekesa uye kutonga mukutora kwezvavanotengesa zvakagadzirwa mukanzuru yesangano rekufamba. Panguva imwecheteyo, zvinoita kuti vafambi vafambe nenzira itsva dzekubhadharira mari yevatengi.
“Mamiriro ezvinhu pari zvino ekubhadhara mabasa achinja zvakanyanya, uye vatambi vatsva uye nzira dzekubhadhara dziri kubuda, zvichipa vafambi mafambiro makuru ekubhadhara mari yevatengi kunhandare dzendege. Nekudaro, kusvika parizvino, nendege dzakatadza kuoneka mune idzi nyowani nzira dzekubhadhara. TIP ichataura nezvenyaya iyi, ichiunza mikana mitsva yendege nevamiriri vekufamba, ”akadaro Aleks Popovich, Mutevedzeri weMutungamiri weIATA, Financial and Distribution Services.
Hapana nzira yekutumira mari inorambidzwa neTIP, asi vamiriri vekufamba vanogona kungoshandisa iwo mafomu ayo ndege yakambopa mvumo. Zvakakosha, kana kambani yendege ikabvuma, ZANO rinobvumidza vamiririri vekufamba kushandisa makadhi avo echikwereti. IATA yakashanda padhuze neakakosha maindasitiri vanobatika kugadzira TIP kuona kuti inopa:
Kuwedzera kujekesa uye kutonga kwemumwe mutambi
Sisitimu inoshanda uye maturusi ekugonesa vamiririri nendege kubvumirana pamwe chete mukushandiswa kweimwe nzira yekuchinjisa, senge makadhi echikwereti nenhamba dzenhoroondo dzenhengo (VANs), yekubhadharira ndege dzesangano Billing uye Settlement Plan (BSP) kutengesa
Iyo resolution resolution iri nani kuchinjiswa kune zvemitemo uye mamiriro emusika.
Pasi peTIP, vanopa dzimwe nzira dzekuchinjisa vanoshuvira kutora chikamu mumitero yakanangana nekutumira ndege kumabhizimusi eBSP vanotengesa vachanyorera neIATA, vopa ruzivo rwakakodzera nezvezvinhu zvavanobhadhara. Vamiririri nendege vachange vachiwana irworwu ruzivo pane inoda-kuziva-hwaro. “Tinotarisira kushanda pamwe nevanopa dzimwe nzira dzekuchinjisa dzakaita seAirPlus International neEdenred Corporate Payment, vanotsigira misimboti iri muTIP. Tinofungidzira kuti vamwe vanopa rubatsiro vanozozvipira kunyoresa zvigadzirwa zvavo mukati megadziriro yeTIP kana nzvimbo yavo yehunyanzvi yagadzirira, kuti vabatsire pakujekesa kwendege neecosystem, "akadaro Popovich.
Pamasvondo anotevera, TIP ichaitwa muIceland neDenmark (9 Chivabvu), Canada (16 Chivabvu), neSingapore (23 Chivabvu), kuburitswa kunotarisirwa kuzadzikiswa mumisika yese yeBSP naQ1 2020.